Rita, Writing for My Sake!: Then & Now !
Posted by Rita at 10/19/2009 07:24:00 PM
19 Oct 09, 20:29
Rita: ကွာတာပေါ့မမရဲ့။ fb မှာဖြုတ်တာတွေက သူများတွေပါပါလို့။ ခု blog မှာ တင်တာတွေက တယောက်တည်းပုံ။
19 Oct 09, 20:25
kom: fb က့ပုံတွေ ကိုဖြုတ်တယ်။ ဘလော့မှာ ပုံတွေတင်တယ်။ ဘာကွာခြားသလဲသိပရစေ။
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ ပြောချင်ရင် ငါ့တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ပြောဆိုတဲ့သဘောလား
စီးတီးပီအမ်က မေးတာလေး ဖြေပေးပါဦး။ =P
ကိုယ့်ဆီ လာလို့ကတော့ လွှတ်လိုက်ဦးမယ်။
(ကိုယ်တင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိနေတာကို တင်တာပါ။ fb က ကိစ္စကတော့ ကြုံကြိုက်လို့ ထည့်ပြောသွားတယ်မှတ်ပါ။)
Nothing to say related this article.
တစ်ခုက ကိုယ့်အနီးဆုံး လူတွေရဲ့ ကိုယ့် အပေါ်ထားတဲ့ ယုံကြည်မှုကို သေချာနေလို့ပါ။ ဘယ်သူ ဘာပြောလို့မှ နားယောင်မယ့်သူ တစ်ယောက်မှ မပါဘူး။
လန့်သွားတာပဲ... ကလူ ကလူ... :P
အိပ်ခါနီးမှ ဘလော့လည်မိတဲ့ ကျွန်တော်မျိုးကြီး သေသင့်ပါတယ်လေ။ အဟား...
hey mama rita
since when u becomeaNarcissus
You have changed in terms of your features while grwoing up. I won't be able to recognize the current you if I am only shown Shwedagon pic. But one thing I can tell for sure is that cute baby Rita turns out to be the pretty Rita. Also, I think that you are quite proportionate.
Oops.....grwoing = growing ( I meant)
Rita က ချောချောလေးပဲ။ Profile က ပုံထက် ပိုချောတယ်။ ကလေးလေးပုံလည်း Rita ပဲလား။
ဟားဟားဟား...."ရှမ်းကြိုက်နွားချော"၊ "ကိုယ်ထင် ကုတင် ရွှေနန်:"၊ "အရူး စိတ်ချမ်းသာ တိုင်းပြည် ငြိမ်:ချမ်း" ဆိုတဲ့ စကားတွေကို အခုမှပဲ သဘောပေါက်တော့တယ်။
အင်း ကိုယ်လဲ သဘောတော့ ပေါက်နေတယ်။
အရူးတွေ စိတ်မချမ်းသာရင် ဘယ်သူမှ မငြိမ်းချမ်းဘူး ဆိုတာကို...
22 Oct 09, 21:07
သိင်္ဂါကျော်: ငယ်ငယ်တုန်းက ပုံလေးက ချစ်စရာလေး...